Faallo Gaaban:Shirka Somalida loogu qabanayo London iyo Somaliland oo la filayo in ay ka qayb gasho. | Calanka Somalia
← Xaflaad laguu tageerayo Maamulka khaatumo state of Somalia (daawo sawirow)
Shirqoolka iyo dabinka cadawgu u dhigay Soomaaliya →
Faallo Gaaban:Shirka Somalida loogu qabanayo London iyo Somaliland oo la filayo in ay ka qayb gasho.
London – Bisha February ee sannadka 2012 waxa magaalada London lagu qabanayaa shir ay dawladda Ingiriisku u qaban qaabisay Somalida. Shirkan oo ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah, isla markaana ay dawladda Ingiriisku dammaana qaadday in ay ka go’an tahay sidii ay wax weyn uga qaban lahayd dhibaatooyinka ammaan darro amma nidaamka dawladnimo ee ay u kala qaybsantay gobollada ayaa ah mid aad looga hadal hayo guud ahaanba dalalka Yurub.
Haddaba markii aan arrintan ka waraysannay dad badan oo xiiseeya arrimaha Somaliya amma Somaliland, waxa ay ka bixiyeen aragtiyo kala duwan. Waxanan fikradaha shacabka aan warsannay ka soo qaadan karnaa, midda ay ka bixiyeen Jaaliyadda qurba joogga Somaliland ee Yurub, oo intooda badani aad uga fiigsan tahay ka qayb galka shirkan, iyaga oo u arkaya in aanay fiicnayn in ay Somaliland ka soo qayb gasho, maaddaama aan loo tixgelinayn maamul ka gaar ah Somaliya.
Dhinaca kale waxa aad u xiisaynaya dadweyne badan oo iyaguna ka mid ah qurba joogga Somali ah ee Yurub, oo u badan kuwayawga taageera maamul goboleedyada tirada daban ee muddooyinkii ugu dambeeyey ka farcamay Somaliya. Waxana la hadal hayaa in ay maamul goboleedyada Awdal State iyo Khaatumo State of Somaliya ay iyana goob joog ahaan uga qayb gali doonaan shirka.
Sida dhawaan uu safiir ku xigeenka Ingiriiska u fadhiya Ethopia uu u sheegay Mudane Ahmed Siilaanyo, waxa dawladda xilligan ee Ingiriiska ka go’an in ay xoogga saarto sidii ay fara gelin badan ugu yeelan lahayd dalka Somaliya ee muddada dheer degi la’, oo ay Somalilandna ku jirto.
Si kastaba ha ahaatee, ka qayb galka Somaliland ayaa keeni kara qiimo jab ku dhaca siyaasadda gooni isku taagga ee muddada dheer ay shacabku ku hammiyayeen in ay mar uun arkaan dalkooda oo la ictiraafo. Taasi oo wiiqi karta rajadii ay shacabkaasi qabeen. Waxana ay dawladda Somaliland dhaxalsiinaysaa in ay kalsoonida shacabka weydo.
Laakiin dhinaca kale haddii ay Somaliland raalli geliso codsiga uga yimid dawladda Ingiriiska oo ay ka qayb gasho shirkani, waxa ay faa’iido heli kartaa in ay dhaqaale fiican oo dhinaca ammaanka iyo horumarintaba ah ka hesho. Shuruudduse ay noqon doonto in ay Somalida wax la qabaan, oo aanay sugin wax Ictiraaf la yidhaa. Haddiise ay shirkan ka soo qayb geli weydo oo ay ku gacan saydho codsiga Ingiriiska, waxa iman karta in ay Somaliland wajahdo cuna qabatayn Siyaasadeed iyo mid dhaqaale, oo aan la siin wax tixgelin ah.
Arrintuna waxa ay noqonaysaa: Laba daranba mid dooro la i yidhi….
Somaliland ma waxa muhiim u ah, masiirka shacabka iyo dawlad gooni ah oo ay noqdaan?
Mise, waxa dan u ah in ay la macaamilaan beesha caalamka oo dhago u yeeshaan waxa ay deeq bixiyayaashu doonayaan, kaddibna ay dawlanimadoodu noqoto mid lagu sugo dawladda federaalka Somaliya ee ay beesha caalamku raadinayaan? Amma beerkii qadada lagu sugayey.
Oo haddii ay Somaliland ka soo qayb galayso, maxay sida Koonfurta Somaliya ugaga soo qayb geli weydey 10 is maamul gobol. Si ay dhaqaalahana u hesho 10 waaxood. Halka ay immiga noqon doonto waax kaliya.